Facebook ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား သေးသိမ်အောင် ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် လူထုမောင်ကာဠု၊ We Love True ကဲ့သို့ပင် မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များလည်း ရှိနေ | democracy for burma
Facebook ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား သေးသိမ်အောင် ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် လူထုမောင်ကာဠု၊ We Love True ကဲ့သို့ပင် မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များလည်း ရှိနေ
tags: Burma, Eleven Media, Lynn Hpone Thant, M MEDIA, Modh Tauki၊, muslim media, Myanmar, NY Kogyi, U WIRA THU, We Love True
အစွန်းရောက် အချို့၏ Facebook စာမျက်နှာများအား တွေ့ရစဉ်
အင်တာနက် သုံးစွဲသူ မြန်မာများအကြား အသုံးပြုမှု မြင့်တက်နေသော လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား သေးသိမ်အောင် ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် လူထုမောင်ကာဠု၊ We Love True ကဲ့သို့ပင် မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များလည်း ရှိနေကြောင်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူများက ပြောကြားပါသည်။
ထိုသို့ ရှိနေသော မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များ၏ စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ၎င်းတို့နှင့် အယူအဆ မတူသူများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရး အပုပ်ချ ရေးသားခြင်းများ၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်စေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
Facebook ပေါ်တွင် ရှိနေသော မွတ်စလင် အစွန်းရောက် စာမျက်နှာများအနက် မောင်သစ္စာ၊ Modh Tauki၊ Myanmar Muslim Media၊ NY Kogyi၊ Mg Mg၊ M Media၊ သမိန်ပေါသွပ်၊ အူးအူးစတီဗင်နှင့် မွတ်စလင် သူရဲကောင်းများ စသူတို့မှာ သိသာထင်ရှားသော စာမျက်နှာများ ဖြစ်နေပြီး ထိုစာမျက်နှာများတွင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရေးသားဖြန့်ဝေနေကြောင်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူများက ပြောကြားပါသည်။
ထိုသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ မဟုတ်သော အခြားနိုင်ငံများတွင် အခြားသော မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ၌ အသတ်ခံခဲ့ရသူများ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများ၏ ဓာတ်ပုံများကို ပြုပြင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွတ်စလင်များ အသတ်ခံနေရကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများ လူမျိုးသုဉ်း အသတ်ခံနေရကြောင်း ပုံကြီးချဲ့ ဖော်ပြကာ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ခဘာသာဝင်များ၏ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီး ပြောဆိုခြင်းများ ရှိခဲ့ပြီး ဘာသာရေး လှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း Time မဂ္ဂဇင်း၏ ရေးသားဖော်ပြချက်ကို ကန့်ကွက်သူများအား ပစ်မှတ်ထားကာ မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များက ၎င်းတို့၏ Facebook စာမျက်နှာများမှ တိုက်ခိုက်ရေးသား ခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ တိုက်ခိုက်ရာတွင် အဆင့်အတန်းရှိရှိ တုံ့ပြန်ရေးသားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်သည့် နည်းလမ်းများ အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်စလင် အစွန်းရောက် သူများ၏ Facebook Account များအနက် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော အူးအူးစတီဗင် Account တွင် “မြန်မာမွတ်စလင်များ နိုကြားလော့” ဟု လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး သွေးဖြင့်ရေးခဲ့သော မြန်မာမွတ်စလင်များ၏သမိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့တွင် မခြောက်ခမ်းသေးကြောင်း၊ မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ မခမ်းခြောက်သေးသော သွေးများ၊ မျက်ရည်များကို တစ်ရက်တွင် နားလည်လာနိုင်စေကြောင်းနှင့် နိုးထလော့ မြန်မာမွတ်စလင်များဟူ၍ လှုံ့ဆော်ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုလှုံ့ဆော်မှုကို ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသူ ၁၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပြီး Lynn Hpone Thant ဟူသော Account တွင် “ဟိုတခြားဘက်က သောက်ပိန်းတွေ လက်စားချေချင်တာတွေ၊ အမုန်းတွေ ဟီးဟီးထနေတာပဲ” ဟု ပြန်လည်ရေးသား ဖော်ပြခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။
ထို့အတူ သမိန်ပေါသွပ် ကြိုက်သူများ Facebook Account တွင် “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုက အကြမ်းဖက် လူသတ်ရမ်းကားမှုတွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်တဲ့သူနဲ့ မသိချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့လေတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရတာ ဘာဆန်းလဲ” ဟု လည်းကောင်း၊ မောင်သစ္စာ Account တွင် “မျိုးစောင့် ဥပဒေနဲ့အတူ သံဃာများ အိမ်ထောင်ပြုရေး သံဃာများ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဝီရသူ မိန့်ကြား” ဆိုသည့် မမှန်သတင်း တစ်ခုကို လည်းကောင်း၊ M Media တွင် “လမ်း ၂၀ ထိပ်တွင် သင်္ကန်းဝတ် သံဃာတော် တစ်ပါးမှ သစ်သားတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ရန်စမှု ဖြစ်ပွား” ဆိုသော မမှန်သတင်းကို လည်းကောင်း၊ Modh Tauki တွင် “ခွေးခြောက်ခွေးတွေ မွတ်စလင်တွေကို တအားမုန်းပြနေတာ ဘယ်နေ့ မွတ်စလင်တွေဆီမှာ အမြီးလာနန့်ပြမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီနေ့ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်စားလျက်ရှိကြောင်း” ဟု လည်းကောင်း အသီးသီးရေးသားပြီး ဘာသာရေး လှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ဆူပူမှုများ ဖြစ်စေရန် တွန်းအားပေး ဖော်ပြမှုများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ် နေခဲ့ကြသည်။
မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များ၏ Facebook စာမျက်နှာများသည် လူထုမောင်ကာဠု၊ We Love True တို့ကဲ့သို့ပင် အမည်နာမ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် မကွဲပြားသော စာများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရေးသားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များသည်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်သော အမြင်ရှိသူဟု ယူဆရသည့် ထင်ရှားကျော်ကြား သူများကို အသရေဖျက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ “အစွန်းရောက်တာကတော့ မကောင်းဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့က လူတွေကို ဘာသာရေးအရ မခွဲဘဲ အစွန်းရောက်တဲ့လူနဲ့ အစွန်းမရောက်တဲ့ လူကိုပဲ ခွဲရမှာပါ။ အစွန်းရောက်တာကို လုံးဝဆန့်ကျင်ပါတယ်။ သမ္မာသမတ်ကျတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ရေးသားတဲ့လူတွေ များများရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အခုတော့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေက ဟိုဘက်အစွန်းရောက်တဲ့လူနဲ့ ဒီဘက်အစွန်းရောက်တဲ့လူတွေ တိုက်နေတဲ့ တိုက်ပွဲလို ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အွန်လိုင်းမှာ သမ္မာသမတ်ကျကျ ရေးတတ်တဲ့ လူတွေကို လိုက်ကြည့်နေတယ်။ အဲဒီလို လူတွေစုဖွဲ့ပြီး များများရေးကြဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ကိုနေဘုန်းလတ်က ဆိုသည်။
ဘာသာတိုင်းမှာ အစွန်းရောက်တွေ ရှိတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ မွတ်စလင် အစွန်းရောက်ရော၊ ခရစ်ယာန် အစွန်းရောက်ရော ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်အစွန်းရောက်ကိုမှ လက်မခံပါဘူး။ လုံးဝအားမပေးဘူး။ အစိုးရကလည်း အစွန်းရောက်တွေကို ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျ ကိုင်တွယ်တယ် . . . . .
ဘာသာရေး အကြောင်းပြပြီး အစွန်းရောက်ကာ ထင်ရာစိုင်းနေသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များကို မည်သူကမျှ လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
“အစွန်းရောက်ဆိုရင် ဘယ်အစွန်းရောက်ကိုမှ ကျွန်တော်တို့ လက်မခံပါဘူး။ မွေးလာတဲ့ မိသားစုပေါ် မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာသာတွေ ကွဲပြားသွားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေက ဒီနိုင်ငံသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လူကိုလူလိုပဲ မြင်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မွတ်စလင် ဘာသာဝင်ဖြစ်သူ ကိုပရှီးက ပြောကြားသည်။
“ဘာသာတိုင်းမှာ အစွန်းရောက်တွေ ရှိတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ မွတ်စလင် အစွန်းရောက်ရော၊ ခရစ်ယာန် အစွန်းရောက်ရော ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်အစွန်းရောက်ကိုမှ လက်မခံပါဘူး။ လုံးဝအားမပေးဘူး။ အစိုးရကလည်း အစွန်းရောက်တွေကို ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျ ကိုင်တွယ်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကလည်း အစွန်းရောက်တွေကို အားမပေးဘူး။ အယ်လ်ကိုင်ဒါကို ဘယ်အစိုးရကမှ တရားဝင် မထောက်ခံဘူး။ အယ်လ်ကိုင်ဒါဆိုတာ ၀ရမ်းပြေး အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ ဘာသာတရားနဲ့ မကြည့်ဘူး။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှု အပေါ်မှာပဲ ကြည့်ပါတယ်” ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အခြေချ နေထိုင်နေသော ဦးမောင်မောင်ကျော်က ပြောကြားသည်။
ဘာသာရေး အကြောင်းပြပြီး အစွန်းရောက် သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရေးသားမှုများကို လက်သင့်မခံကြောင်းနှင့် စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ဆင်ခြင်တုံ တရားဖြင့်သာ ဖတ်ရှုသင့်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောကြားသည်။ ဘာသာရေး အကြောင်းပြပြီး အစွန်းရောက် သူများ၏ ပြောဆိုရေးသားမှုများကို အရေးယူနိုင်သော ဥပဒေများလည်း ရှိထားပြီးဖြစ်ပြီး ရာဇသတ်ကြီး အခန်း ၂၂၊ ရာဇ၀တ် မကင်းသော ခြောက်လှန့်မှု၊ စော်ကားမှုနှင့် စိတ်ငြိုငြင်စေမှုများ အခန်းပါ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ဂ) တွင် မည်သူမဆို ဖော်ပြချက်ကိုဖြစ်စေ၊ ကောလာဟလကိုဖြစ်စေ၊ သတင်းကိုဖြစ်စေ ပြုရာတွင် သို့တည်းမဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာရာတွင် သို့တည်းမဟုတ် ဖြန့်ချိရာတွင် လူအမျိုးအစား အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ လူမျိုးစု အချင်းချင်းဖြစ်စေ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပြစ်မှုကျူးလွန်အောင် လှုံ့ဆော်ရန် အကြံရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုဖြစ်စေ တန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထို့ပြင် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသော နေရာကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ယုတ်ညံ့စေခြင်း၊ လူတစ်စား ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာသာသနာကို ဖြစ်စေ၊ ဘာသာသာသနာရေး ယုံကြည်မှုကို ဖြစ်စေ စော်ကားခြင်းဖြင့် ထိုလူတစ်စား၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေး စိတ်ဓာတ်ကို နာကြည်းစေရန် ကြံရွယ်၍ မသမာစိတ်ဖြင့် တမင်ကျုးလွန်သော ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ရာဇသတ်ကြီး အခန်း ၁၅ ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများ အခန်းပုဒ်မ ၂၉၅ နှင့်၂၉၅ (က) အရ နှစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ များပေါ်တွင် မိမိ၏ အမည်မှန်ကို မဖော်ပြဘဲ သတင်းအမှားများ ထုတ်လွှင့်ပြီး သွေးထိုးလှုံဆော်မှုများ ရှိနေကာ ထိုရေးသားမှုများ မဟုတ်မှန်ကြောင်းကို အမှန်တရား ဖော်ထုတ်သူများက ပြန်လည်ရေးသားချိန်၌ ၎င်းတို့၏ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများသည် အရာမထင်သည့်အပြင် လုပ်ကြံသူသာ သိက္ခာမရှိသူ ဖြစ်သွားမည်ဟု အင်တာနက် သုံးစွဲသူများက ပြောကြားသည်။
We try extract to who is be radical; be extreme personal from Face book . In Burma has special law for this
← MEKONG: situation has become worse since Naw Kham’s arrest
U YE HTUT: ဗီအိုအေ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြချက် →